DEGDEG DAAWO: Shiikh Shariif oo Balankii ugu baxay Xassan Shiikh & Fahad yaasiin oo qanciyay+Xog Culus | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay Marqaan news ayaa sheegaya in Magaalada Muqdisho uu isaga baxay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed, isagoona u ambabaxay Dalka Uganda.
Sheekh Shariif ayaa dalka inta uusan ka bixin waxaa uu todobaadkii lasoo dhaafay kulan la qaatay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, isagoona la saxiixday heshiis rasmi ah oo dowladda heshiis uu kula galayo.
Sheekh Shariif oo ahaa Madasha Xisbiyada Qaran ayaa dhawaan dhaar ku maray inuu dalka ka saari doono dowladda Farmaajo, kadib markii isaga iyo Xasan Sheekh ay xayiraat saartay, iyaga oo doonayay inay dalka ka dhoofaan.
Sidoo kale Shariif ayaa qiyaano Cad ku sameeyay Madasha Xisbiyada Qaran ee uu hogaamiyaha uu ka yahay, taasi oo ah Madal mucaarad ku ah dowladda Farmaajo iyo Kheyre.
Waxaa kaloo la sheegay in la kala jebiyay xubnaha Mucaaradka dowladda, waxaan qeyb ka ah Shariif Sh Axmed oo la siiyay sida la tilmaamay lacag badan oo laga codsay in mar kale uusan dowladda wax ka sheegin.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in Shariif uu balantii banaanbaxa ee Shacabka Muqdisho ugu baaqay uu ka baxay, isagoo wax cudur daar ah bixin sababta baajisay banaanbaxa.
Dhinaca kale Xasan Daahir Aweys oo ah Maxbuus u xiran dowladda ayaa kal hore sheegay Sheekh Shariif uu yahay nin dadka ku daneysta, isla markaana markii uu dantiisa gaaro meel cidlo ah uga taga.
Sidoo kale Xasan Daahir Aweys ayaa tilmaamay inuusan ka cabsaneyn in dadka nacaan, wuxuuna sheegay inay jiraan dad badan oo Shiikh Shariif ku qatalan.
Si kastaba dad badan oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa Sheekh Shariif ku tilmaamay inuu qiyaanay Madasha Xisbiyada Qaran, isla markaana uu heshiis la galay dowladda Farmaajo kana dhoofay dalka isaga oo aaday dalka Uganda.
Previous articleDAAWO: Siyaasi C/raxmaan C/shakuur oo Weerar culus ku qaaday Dowlada Farmaajo & Go’aankiisa Madasha Qaran!
Next articleS/land oo hadal culus kasoo saartay sargaal Muhiim u ahaa oo Puntland usoo goostay (Aqriso)